အိမ်စာမျက်နှာ / သတင်း / သတင်းဂျာနယ်စင်တာ / ပဟေဠိဆန် 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း လေလံတင်မှုဖြေရှင်းခြင်း၊
နောက်ဆုံးတွင် 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏လေလံတင်ဝယ်ယူမှုသည်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်၏ညဉ့်နက်ကိုကျော်လွန်ပြီး၊ ၁၉ ရက်နံနက်တွင်ပြီးဆုံးသွားသည်။လေလံပွဲ၏ရလဒ်မှာ အနိုင်ရသော ဈေးနှုန်း နှင့်အနိုင်ရသူပါ ထင်ထားသည်ထက် ပို၍ရရှိပြီး၊လေလံပွဲကာလအတွင်းတွင်၊ သံသယဖြစ် သော မေးခွန်း မြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်၊ လေလံတင်ပွဲအပြီးသံသယရှိသည်မှာ လေလံတင်အနိုင်ရသူ ၄ ဦးစလုံး ၏အနာဂတ်ဆိုင်ရာသံသယများအတွက်အောက်ပါဖေါ်ပြချက်များကိုရှာဖွေဖတ်ကြားကြည့် စေလိုပါ သည်။
၁. 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း လေလံတင်ဝယ်ယူပွဲတွင်၊ အခြားလှိုင်းကြိမ်နှုန်းရှိနေပြီးသော လုပ်ငန်း ရှင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ထပ်မံ၍ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပါသနည်း၊
လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကာလတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်၏အဓိကဝန်ဆောင်မှုသည်၊ မိုဘိုင်း ဘရော့ဒ်ဘန်းဖုန်း ဝန် ဆောင်မှု(ယခင်ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်လက်ခံမှုသာ) ဖြစ်သည်၊ ဤဝန်ဆောင်မှု၏လျှင်မြန်မှုသည်၊ အသုံးပြု သော လှိုင်းကြိမ်နှုန်းပမာဏပေါ်မူတည်သည်၊ ထို့အပြင်ပစ္စုပ္ပန်တွင်လှိုင်းအသီးသီးမှ နည်းပညာများပေါင်း စပ်ပြီး၊ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်များသည်ဝန်ဆောင်မှု ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှု အတွက်လှိုိင်း တိုင်းနီးပါးရှိလေလံပွဲများတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၂. 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏ဈေးနှုန်းသည် အဘယ်ကြောင့် 1800 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်းထက် ဈေးကြီးပါသနည်း၊
900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း ၏ဈေးနှုန်းသည်1800 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်းထက်ပို၍ကျယ်ပြန့်စွာ ခရီးဝေး သွားနိုင်သည်။ တိုင်တစ်တိုင်တပ်ဆင်မှုသည် 1800 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏တိုင် ၃ တိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ တူညီ သော ဧရိယာအတွင်းတွင်တိုးချဲ့မှုကုန်ကျစရိတ်ပိုသက်သာသည်၊ 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာပျမ်းမျှတစ်ယူနစ်တန်ဖိုးသည်1800 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်းထက် ၂ ဆပိုမြင့်သည်။
၃. 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်းတူသော်လည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ပထမလှိုင်း၏ ဈေးနှုန်း သည်၊ ဒုတိယလှိုင်း ထက်ဈေးနှုန်းသက်သာပါသနည်း၊
ပထမလှိုင်းစီးရီးသည် 850 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်းနှင့်ကပ်လျှက်ဘားဖြစ်သည်၊ DTAC လိုင်းက 3G ဝန် ဆောင်မှုပေးနေသည့်အတွက် လိုင်းနှောက်ယှက်မှုပြဿနာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ခို့ကြောင့်အတိတ်ကာလ တွင် 3.5 MHz ခန့်ကာထားသည်၊ကြားခံဧရိယာ (သို့မဟုတ်) guard band ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊17.5 MHz ဝန်ဆောင်မှု အတွက် 900 MHz ကကြွင်းကျန်စေသည်၊သို့သော်ဤအကြိမ်လေလံပွဲတွင် ရုပ်သံလိုင်းက guard band ၏ အရွယ်အစားကို 2.5 MHz ခန့်လျှော့ထားပြီး၊ မူပိုင်ခွင့်သဘောတူ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး သော လှိုင်း နှင့်ပေါင်းစပ်ရန် လေလံတင်မှု၏လှိုင်းပမာဏကို 20 MHz တိုးထားသည်၊ နည်း ပညာ လက်တွေ့ တွင် လေလံတင် အနိုင်ရသောလုပ်ငန်းရှင်သည်လှိုင်းနှောက်ယှက်မှုပြဿနာဖြေ ရှင်းမှုကိရိယာ တပ်ဆင်ထား ရမည်၊ ဤ အဆင့် ၏ထပ်မံကုန်ကျစရိတ်သည် ဘတ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀ အထိမြှင့်နိုင်သ ည်၊ ဒုတိယလှိုင်းတွင်မူ ဤကဲ့သို့ပြဿနာ များကြုံတွေ့မှုမရှိသည့်အတွက်၊ ထပ်မံကုန်ဆုံးရမည့်ကုန်ကျ စရိတ်မရှိပါ၊ ဤအချက်အလက် သည် AIS (ဒုတိယလှိုင်းတွင်လေလံရှုံးသူ)သည် JAS (ပထမလှိုင်းတွင်အနိုင်ရသူ )ထက် ပိုမိုမြှင့်မားသော ဈေးကို အဆို တင်ပြသော်လည်း၊ ဆုံးရှုံးရသည်၊ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ AIS သည်ပထမလှိုင်းကို ပြန်လည် အနိုင်ရလိုလျှင်လိုင်း နှောက်ယှက်မှုပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သန်း ထောင်ပေါင်း များစွာထပ်မံ ကုန်ဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယ လှိုင်းယှဉ်ပြုင်မှုကို ရပ်တန့်ရခြင်းဖြစ်သည်။
၄. ဤအကြိမ်၏အနိုင်ရသောလေလံဈေးနှုန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးလား၊
ဤအကြိမ်၏လေလံဈေးနှုန်းသည် အားလုံး၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သည့်အတွက်၊ အခြားနိုင်ငံများထက်၊ ပိုမိုမြင့်သလား ဟု သံသယရှိကြသည်၊ ဤအကြိမ် 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏ လေလံ တန်ဖိုး ခန့်မှန်းရန် ITU ၏လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာအရ - နိုင်ငံအသီးသီး ၏လေလံဝယ်ယူမှု ရလဒ်များစုပေါင်း ခြုံကြည့်လျှင် (နိုင်ငံတိုင်းပြည့်စုံအောင်မပြလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကမ္ကာ့စံချိန်ဟုအတည်မပြုနိုင်) အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့နိုင်သည်။ အတိတ်ကာလတွင် 900 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏ အမြင့်ဆုံးလေလံတန်ဖိုးသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဟောင် ကောင်လေလံတင်ပွဲတွင် တစ်ယူနစ်၏ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမှာ လူတစ်ဦးနှုန်း megahertz နှုန်း သည် ၆၄ ဘတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအနိုင်ရလေလံ၏ဈေးနှုန်းသည် လူတစ်ဦးနှုန်း megahertz နှုန်း သည် ၅၇ ဘတ် ခန့်ဖြစ်ပြီး၊ထိုင်း နိုင်ငံ လေလံနှုန်းကပိုနိမ့်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်ကိန်းဂဏန်း သတ်သတ်နှိုင်းယှဉ်မှု သာဖြစ်သည်၊ ဝယ်ယူစွမ်းအားကွာခြားမှုနှုန်း (Purchasing power parity) ၏ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးအရဆို လျှင်ဟောင်ကောင်ပျမ်းမျှဈေး နှုန်း၏ လူတစ်ဦးနှုန်း megahertz နှုန်း သည် ၅၁ ဘတ်သာ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ကပိုမြင့်ကြောင်းတွေ့ရသည်၊ ဟောင်ကောင်၏တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ရလဒ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၅. လေလံကြိမ်အရေ၇တွက်သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးလား၊
ဤအကြိမ်၏လေလံဈေးနှုန်းသည် ၁၉၈ ကြိမ်အထိ လေလံထုသည်။လွန်ခဲ့သော 1800 MHz လှိုင်း ကြိမ်နှုန်း၏လေလံပွဲထက်ပိုကြာသည့်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြာဆုံးလား၊ ဟုသံသယရှိကြသည်၊အမှန်စင် စစ်မှာ နိုင်ငံခြားတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်လေလံတင်ပွဲ ၂ လနီးပါးကြာပြီး၊ ၃၃၁ ကြိမ် တွင်ပြီးဆုံး သွား သည်၊ သို့သော်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ထိုင်း နိုင်ငံကဲ့သို့လေလံထုသူများအား နေရာတစ်နေရာထဲ တွင်ဧရိ ယာ သတ်မှတ်မှုများမရှိပါ။
လေလံဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းသည် ဝယ်လိုအားမြင့်မားခြင်းကိုဖေါ်ပြသည်၊ ဝယ်လိုအားမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းမှာ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှသည်၊
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ - လှိုင်းကြိမ်နှုန်း 900 MHz သည် ကွန်ရက်တိုးချဲ့ဘတ်ဂျက်ကို သက်သာ စေသည်၊ အရေးကြီးသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဤအကြိမ်တွင် လေလံတင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်မှု အတွက် လှိုင်းကြိမ်နှုန်း 20 MHz သာကျန်တော့သည်၊ ၊အိန္ဒယ သို့မဟုတ် ဂျာမနီန်ုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံ ခြား တိုင်း ပြည်များ တွင်ထိုင်းနိုင်ငံထက်ပိုများသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများရှားပါးချိန်တွင်ဝယ်လိုအားမြင့်မားခြင်း သည်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဝယ်လိုအားမြင့်မားရခြင်းဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ဝေစုဆိုင်ရာအချက်များ - ဝန်ဆောင်မှုအသစ်လုပ်ငန်းရှင်များက မိုဘိုင်းဖုန်းဝန်ဆောင်မှုဈေး ကွက်အတွက် အောင်မြင်စေချင်ခြင်း၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဟောင်းများလည်းမိမိ၏သဘောတူစာချုပ်အရလုပ်ကိုင် နေသော လှိုင်းကြိမ်နှုန်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုရှိစေရန်၊ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း၊တချို့လုပ်ငန်းရှင်သည် ကန်ထ ရိုက်သက်တန်းကုန်တော့မည့်အနာဂတ်တွင်စွန့်စားမှုအန္တရာယ်များလျှော့ချနိုင်ရေးတွက်လှိုင်းကြိမ်နှုန်းကိုထပ်မံလိုချင်ခြင်း၊တစ်ချို့လုပ်ငန်းရှင်သည်လှိုင်းကြိမ်နှုန်းရရှိထားပိုင်ခွင့်ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်ဝေစုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရစ်ကျငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်များ - အခြားလေလံတင်ဝယ်ယူမှုတွင် ရုပ်သံလိုင်းရုံးသည် ပထမ အရစ် ငွေပေးချေမှုတွင်၅၀%ပေးချေရန်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ဒုတိယအရစ်တွင် ၂၅%၊ လေလံတင်ဈေးနှုန်းမြင့်လေ၊ ပထမအရစ်ပေးချေငွေပိုများလေဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအကြိမ်တွင် ရုပ်သံလိုင်းရုံး သည်ပထမရစ်တွင်ဘတ် သန်းပေါင်း ၈၀၀၀ ပေးချေရန်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ဒုတိယနှင့် တတိယအရစ်အတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ဘတ်သန်း ပေါင်း ၄၀၀၀နှင့်၊ ကျန်ရှိသောအရစ်အားလုံး အတွက် သည်စတုတ္ထအရစ်အဖြစ်ပေး ချေရန်သတ်မှတ်ထား သည်၊လေလံဈေးနှုန်းကို ဆက်တိုက်တိုးမြှင့်စေသည်၊ အဆိုပါတိုးလာသည့်လေလံဈေးနှုန်းသည်ပထမသုံးရစ်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ဆက်လက် အကျိုးသက်ရောက်စေမှု မရှိပါ၊ ဤကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပထမ၄နှစ်အတွင်းဝင်ငွေတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ အဆိုပါဝင်ငွေဖြင့်နောက်ဆုံးအရစ်အ တွက်ပေးချေနိုင်ပါက ကာလတိုအတွင်းကြွေးမြီများနှင့်အတိုးငွေများ ဆိုင်ရာတာဝန်ယူရမည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး များ ရှိလိမ့်မည်မ ဟုတ်ပါ။
၇. လေလံတင်နိုင်သူသည် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုမရှိလျှင်ကြွေးမြီမပေးချေ၍ရနိုင်မလား၊
အထက်ပါအရစ်ကျငွေပေးချေမှုများအရ- လေလံတင်နိုင်သူသည်ကြွေးမြီကို 10 :5:5: 80 အချိုး အတိုင်းအရစ်ကျပေးချေရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ နောက်ဆုံးအရစ်သည် အနိုင်ရလေလံတန်ဖိုး၏ ၈၀% နီးပါးပေး ချေရမည်ဖြစ်သည်၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှင်သန်နိုင်လျှင်၊ ကြီးမားတဲ့ ကြွေးမြီအပေါ်ကတိ ပျက်နိုင်သည်၊ဟုသံသယရှိသည်၊ အမှန်စင်စစ်မှာ ရုပ်သံလိုင်းက ပထမအရစ်တွင် ဘတ်ငွေ သန်းပေါင်း ၈၀၀၀ ပေးချေရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်၊ သို့သော် ကျန်ရှိသောငွေတန်ဖိုး အားလုံးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ အစည်း မှအာမခံချက်ပါအပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အကယ်၍မည်သည့်အရစ်တွင်မဆိုအရစ်ကျငွေပေးချေမှုမရှိလျှင် ရုပ်သံလိုင်းကအပ်ထား သော ဘဏ်အာမခံချက်အပေါင်ပစ္စည်း သိမ်းယူရန်ဥပဒေရေးရာကအရေးယူနိုင်ပါသည်။
၈. မြင့်မားသောလေလံတန်ဖိုးသည် 4G ဝန်ဆောင်မှုအား ဈေးကြီးစေနိုင်ပါသလား၊
သည်။ ဓါတ်ဆီဆိုင်ကိုဈေးဘယ်လောက်ကြီးကြီးငှါးထားသော်လည်း၊ရေနံရောင်းရာတွင် ပြိုင်ဘက်ဈေးနှုန်း ထက်အကျော်အောင်ရောင်းရမည်ဖြစ်သည်၊ မဟုတ်လျှင်ရေနံလာရောက်ဖြည့်သူရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ငှါးရမ်း ခအတွက်တာဝန်ယူမှုသည်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် AIS နှင့် DTAC သည်လေလံ မနိုင် သော်လည်း၊ 4G ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်၊လေလံအနိုင်ရသူကဈေးကွက်ဝေစုကိုလုချင်ပါက လက်ရှိ 4G ထက်ပိုပြီးဈေးကြီးစွာ မရောင်းချနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။
၉. စားသုံးသူ/သုံးစွဲသူအား သက်ရောက်မှုရှိစေသောအရာကမည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း၊
ရုပ်သံလိုင်းက လက်ရှိပျမ်းမျှနှုန်းထက်ပိုနိမ့်ရန်လျှော့ချရမည့် အခကြေးငွေပျမ်းမျှနှုန်းဆိုင်ရာ စည်း ကမ်းချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်၊သို့သော်ဖြစ်နိုင်သညမှာအကယ်၍လေလံနိုင်သူသည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ရလဒ်ကိုအားတင်းဆွဲထားနိုင်လျှင် ဝန်ဆောင်ခလျှော့ချမှုကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လေလံနိုင်သူသည်ကွန်ယက်တိုးချဲ့ရန်ဘတ်ကျက်အခက်အခဲရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ ၏လွှမ်းခြုံမှု ဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်သံလိုင်းက ဘက်စုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ လိုအပ်လျှင် အများပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်၊ စည်းကမ်းချက်များ ထပ်မံ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၀. လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏လေလံပွဲပြီးနောက် အနာဂတ်တွင်မိုဘိုင်းဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု
AIS နှင့် DTACအတွက် လေလံပွဲအနိုင်မရသော်လည်း၊ရပ်တည်ပြီးထုသောဈေးနှုန်းအဆင့်မှာဘတ် သန်းပေါင်း ၇၀၀၀ အထိဖြစ်ခြင်းသည် နှစ်ဘက်စလုံးထိုင်းနိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းဈေးကွက်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ အလားအလာမရှိပဲ၊အပြင်းအထန်တိုက်သည်ကိုဖေါ်ပြနိုင်သည်၊ပစ္စုပ္ပန်မှာနှစ်ဦးစလုံးသည် ဆိုးဝါးသော အခြေအနေအောက်မှာမရှိပါ၊သို့သော် ဝန်ဆောင်မှု၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဈေးကွက်ဝေစုရရှိ မည့် မဟာဗျူ ဟာ များရေးဆွဲရန်သာ ရှိသည်။ TRUE အတွက်မှာမူ 900 MHz နှင့် 1800 MHz လှိုင်းကြိမ်နှုန်း လေလံဝယ်ယူမှု တွင်အနိုင်ရယူနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၁ မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်အဆင့် သို့ခြေလှမ်းလှမ်း ရန်လိုအပ်ကြောင်းသရုပ်ပြသည်၊လှိုင်းကြိမ်နှုန်းပမာဏအများ အပြား ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာများ၏ လွှမ်းခြုံမှုအတွက်ကောင်းမွန် သည်။
မိုဘိုင်းဈေးကွက်အတွက်အသစ်ဖြစ်သော JAS သည် ယခင်ကရှိပြီးသားဖြစ်သော ကြိုးဘရော့ဘန်း နှင့် Wi-Fi ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေသည်။ မိုဘိုင်းဘရော့ဘန်းဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်မိုဘိုင်း ဘရော့ဒ်ဘန်း ဖောက်သည်များအားယန်ဆောင်မှုပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ JAS ထုသောလေလံဈေးနှုန်း သည် လုပ်ငန်းသစ်အ တွက်အမြတ်အစွန်းဖြစ်ရန်မြင့်လွန်း သော်လည်း၊ကြီးမားသောလုပ်ငန်းရှင်ဟောင်း အဆင့်အတွက် ဈေးနှုန်း ဖြစ် သည်၊သို့သော်မျှော်လင့်ထားမှုမှာ JAS သည် မိုးဘိုင်းဈေးကွက်ဝင်နိုင်ရန်၊ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစိတ်အပိုင်းများ လျှော့ချစေရန်၊ လေလံပွဲတွင်အနိုင်မရသော မိုဘိုင်းစခန်းဟောင်း များနှင့်အတူ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာ တွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လှိုင်းကြိမ်နှုန်း လွှမ်းခြုံမှုပမာဏနည်းနေသော မိုဘိုင်းစခန်းအချို့ သည်စီးပွားဖက်ဖြစ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်၊မိုဘိုင်းဈေး ကွက်ထဲတွင်သုံးဦးအဓိကနှစ်ပေါင်းများစွာယှဉ်ပြိုင်ကြပြီးနောက်၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ပေါ်ပေါက်ခြင်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
၁၁. ဤအကြိမ်၏လေလံတင်ပွဲသည် ရုပ်သံလိုင်းအား ဝင်ငွေမြောက်များစွာရရှိစေသည်
ရုပ်သံလိုင်းသည် လှိုင်းကြိမ်နှုန်းများကိုလေလံတင်စနစ်ဖြင့်ခွဲဝေပေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်ဝင် ငွေအားလုံးသည်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးနုတ်ပြီးပါကနိုင်ငံတော်၏ဝင်ငွေအဖြစ်ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်၊ ရုပ်သံလိုင်း၏ဝင်ငွေမဟုတ်ပါ၊ အဆိုပါဝင်ငွေ၏အသုံးချမှုသည်အစိုးရပေါ်မူတည်သည်၊ အစိုးရအခွင့် အာ ဏာအဖြစ်ကန့် သတ်ချက်မရှိလုပ်ငန်းအားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ဆက်သွယ်ရေးစက်မှု လုပ်ငန်းသည်လည်း၊ဒစ်ဂျဒ်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုတိုးတက်မှုအတွက်အစိုးရမှဘတ်ဂျက်အချို့ကိုခွဲဝေချထားပေးစေလိုပါသည်၊ ဤသည်မိုဘိုင်းဈေးကွက်နှင့်သကဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား စဉ်ဆက်မပြတ်တိုး တက်စေနိုင်သည်။ရုပ်သံလိုင်းအနေဖြင့်လေလံတင်ဝယ်ယူမှုတစ်မျိုးတည်းသာတာဝန်ရှိခြင်းမဟုတ်ပဲ၊လေလံပွဲပြီးလျှင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှု၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများ၊အရေးကြီးဆုံးမှာသုံးစွဲသူများ တရားမျှတသော ဝန် ဆောင်မှု ရှိရေး၊အကယ်၍နောက်ပိုင်းတွင် မမျှော်လင့်ပဲ၊မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်၌ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများ သောလုပ်ငန်းရှင်ကလက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ဖြစ်သွားလျှင်၊ ရုပ်သံ လိုင်း က အဆိုပါတစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ ဆောင်ရွက်ချက်များ ရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဖနျတီးသူ - (24-05-2017 22:27:22)